LED မျက်နှာပြင်ဗွီဒီယိုနံရံများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemsနာများ - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
led အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, ၎င်းသည်မကြာခဏ တင်၍ မရနိုင်သောမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြသည်. ဦး ဆောင်သောအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူသည်အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အောက်ပါရှုထောင့်များမှ load မအောင်မြင်သောအချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်?
1. Jumper ဦး ထုပ်သည်ဖြည်းဖြည်းသို့မဟုတ်ကျသွားလျှင်စစ်ဆေးပါ; အဆိုပါ Jumper ဦး ထုပ်ချောင်မပါလျှင်, ကျေးဇူးပြုပြီး Jumper cap ၏ညှနျကွားမှုအတိုငျးအတာတစျခုအတိုငျးသေချာပါစေ.
2. Controller ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည့် serial cable သည် straight-through cable ဖြစ်သည်ကိုစစ်ဆေးပြီးအသိအမှတ်ပြုပါ, မ crossover cable ကို.
3. serial port connection cable သည်နဂိုအတိုင်းရှိနေပြီးအဆုံးသတ်နှစ်ခုစလုံးကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်စစ်ဆေးပါ.
4. တိကျသောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်ကိုရွေးရန် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ထိန်းချုပ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) နှင့်မိမိကိုယ်ကိုရွေးချယ်သည့်ထိန်းချုပ်ကဒ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ, တိကျသောဂီယာနည်းလမ်း, တိကျမှန်ကန်သော string ကိုဆောင်ပုဒ်, တိကျသော baud နှုန်းကို, နှင့် software hardware တွင်ဖော်ပြထားသော dial switch diagram ကိုတိကျစွာသတ်မှတ်ပါ။ System hardware ရှိ address bit နှင့် baud rate ကိုထိန်းချုပ်ပါ.
5. ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဟာ့ဒ်ဝဲတိကျစွာဖွင့်ထားသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ. (+5V)
6. အထက်ပါစစ်ဆေးမှုများနှင့်စံကိုက်ညှိပြီးနောက်၎င်းသည် load မအောင်မြင်ပါက, ဆက်သွယ်ထားသောကွန်ပျူတာ (သို့) ထိန်းချုပ်မှုစနစ် hardware ၏ serial port ပျက်စီးခြင်းရှိမရှိတိုင်းတာရန် multimeter ကိုသုံးပါ. စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူသို့ပြန်ပို့သင့်၊ မသင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်.
တိုတိုပြောရရင်, အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏ပုံမှန်မဟုတ်သောတင်ပို့မှုကို ဦး တည်စေသောအချက်မှာထုတ်ကုန်ကိုယ်နှိုက်ဖြစ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်ပါကလျှောက်ထားနေစဉ်အတွင်းမလျော်ကန်သောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်. ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါသို့မဟုတ်မေးခွန်း၏ရင်းမြစ်ကိုရှာရန်ထုတ်လုပ်သူကိုပြောပါ.
DIP led screen နှင့် SMD display screen အကြားခြားနားချက်
ကြော်ငြာခြင်းအတွက် LED ဗီဒီယိုနံရံမျက်နှာပြင်၏အားသာချက်များ
ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်၏စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်တွင်မည်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်? မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်၏စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်တွင်မည်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်?